Home Wararka Shaqsiyaad qoysaskooda ay masruufaan wadamo dano ka leh Soomaaliya, ma lagu aamini...
Shaqsiyaad qoysaskooda ay masruufaan wadamo dano ka leh Soomaaliya, ma lagu aamini karaa hogaanka dalka?
Qaranimada Soomaaliya waxaa aasaas u ah xuriyad, gobannimo dimoqoraadi ah taas oo xaqiijinaysa in gobonimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay laguma xadgudbaan, waxaana reeban in qof damac kaga jiro in hogaamiyo dalkeena uu dawarsado wadamo shisheeye.
Wadamada qaar waxaa ka reebay qof mas’uul ka soo noqday dalka ama damac kaaga jiro hogaaminta dalka uu sooryo ama hadiyad gaar ah uu ka qaato dalal shisheeye iskaba daa in caruurtiisa loo masruufo.
Waxaa nasiib xumo ah in qaar kamida kuwa rajada kaga jirto hogaanka dalka Soomaaliya ay caruurtooda masruufaan wadamo shisheeye oo dano gaar ah ka leh dalkeena.
Waxaa taa ka sii daran in shaqsiyaadkaas ayan ku jirin wax yar oo damqasho ama hishood ah taas oo salka ku heysta inay ilaaliyaan qayimka iyo karaamada Umadda Soomaaliyeed. Hadii uusan jirin sharci qabanaya kooxaha ka ganacsada karaamada Umadda Soomaaliyeed, waxa ay ahayd in ay iyagu ka xishoodaan inay u tartamaan inay qabtaan hogaanka dalka Soomaaliya.
Wadamada qaar shaqsiyaadka noocaan ah ee iibsada karamaada umadooda waxaa loo taxaabaa xabsi iskaba daa inay ku hamiyaan inay qabtaan jagada ugu sareeysa dalkooda. Waxaana ficilka noocaan ah lagu tilmaamaa qiyaano Qaran.
Tusaale waxaa nooga filan, Musharaxa Madaxweynaha Soomaaliya ahan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, Shiikh Sharif. Sadaxdiisa xaaas waxaa masruufa sadax wadan oo dano ka leh dalka Soomaaliya; Waxa ay ku nool yihiin dalalka Imaaraadka, Turkiga iyo dalka Uganda. Waxaa laga bixiyaan cuno, kirada guriga iyo dhamaan wixii kaalmo ah oo ay u baahnaan kataa?.
Ma kula tahay in Shiikh Sharif hadii la doorto uu ka hor-imaan karo danaha gaarka ah oo ay wadamadaaas ka leeyihiin dalka Soomaaliya. Waxa ay hayaan sirtiisa, waxa ay masruufaan qoysaskiisa, waxaana macquuk ah in uu horay ula wadagaaday wadamadaas sirta dalka Soomaaliya.
Waxa kale isagana tusaale nooga filan Ra’iisal Wasaare Rooble oo caruurtiisa dhawaan la dajiyay magaalada Doha ee dalka Qatar. Waxa loo iibiyay guri, waxaa loo qoray mushaar, waxaan shaqaale looga dhigay haween laga keenay dalka Philipine.
RW Rooble oo ku farasxan deeqdaas la siiyay, ayaa durbadiida waxaa lagu qasbay in uu ka shaqeeyo danaha gaarka ee dalka Qatar ka leedahay Soomaaliya taas oo ah in uu ka tanaasulo dacwada Ikram Tahliil isaga uu gabi ahaanba isku dhiibayo Farmaajo.
Kooxaha noocaan ah ee aan ka xishoonayin in ay iibsadaan karamaada Umadda Soomaaliyeed, waa lama huraan in umadda Soomaaliyeed ka tashaadaan, talaabana ka qaadaaan hadii kale Soomaaliya waligeed ma nooqon doonto dowlad Madaxbanaan oo ayaaheeda ka tashan karto.